Xadiiska Mawduuca Qeybtii 2aad | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Xadiiska Mawduuca Qeybtii 2aad
Maxay tahay sababaha ku kalifa dadka inay sameeyaan xadiisyo, Mawduuc/been abuurasho ah?
Dhawr sabab ayaa dhaliya inay dadku u sameeyaan xadiis Mawduuc ah, waxaana kamid ah:-
Dadka qaar waxay xadiis mawduuc ah u sameeyaan , waxay doonayaan sidii ay Ilaahay ugu dhawaan laahayeen. Waxayna alifaan axadiis been ah iyagoo ujeedadoodu tahay sidii ay dadka u jeclaysiiyaan khayrka, xumaantana uga digaan. Xadiisyadaa noocaas ah waxaa kamid ah, xadiiska tilmaamaya fadliga suuradaha Qur’aanka suurad suurad ee aan horey u soo sheegnay.
Qoladaas iyaga ahi waa kuwa sheegata Zuhdi iyo wanaag hase yeeshee waa kuwa ugu shar badan dadka dejiya xadiisyada mowduuca ah, sababtoo ah waa kuwo lagu kalsoonyahay cibaadadooda iyo zuhdigooda oo ay dadkuna rumeystaan, xadiskeey sheegan dadku way qaataan dhaqan geliyaan, iyagoo moodaya xadiis dhaba ah.
Mad-hab ka guuleysi : Xaaladann Mad-habaysiga waxay timi ka dib markay dhacday fitnadii muslimiinta la soo daristay xiligii Mucawiyah iyo Cali rc. Waxaa dhashay kooxo siyaasadeysan sida Khawaarijta iyo Shiicada ka dibna qolo walbaa waxay sameysatay xadiisyo ay ku xoojinayso mad-habkeeda. xadiisyadaas mawduuca ahi waxaa kamid ah xadiiska odhanaya “علي خير البشر من شك فيه كفر”
Xadiiskaan mowduuca ah micnihiisa waxaa weeye (Cali waa kan u khayr badan dadka qofkii ka shakiyaana waa gaaloobay) iyo kuwo badan oo la midda xadiiskaan.
Qaar ka mid ah cadowga Islaamka ayaa sidoo kale iyaguna waxay sameeyeen xadiisyo mowduuca, ka dib markii ay awood u waayeen inay si toosa wax u yeelaan musliminta, ayaa si ay u canbaareeyaan Islaamka waxay adeegsadeen xadiisyo mowduuca .
Qaarbaa axadiiska mawduuca u sameeya iyagoo doonaya u dhawaansho madaxda iyo dadka xukunka haystay . kuwaas oo ah kuwo iimaankoodu hooseeyo ayaa waxay sameeyeen xadiisyo mowduuca oo waafaqsan hawada madaxweynayaasha , si ay uga helaan u dhowaansho madaxdaas, in yar oo maal ahna loo siiyo .
Dadaalkii culimada ee ka hortaga Xadiiska mowduuca ah.
Culimadu waxay dadaal badan ku bixiyeen sideey u ilaalin lahaayeen Sunnada Rasuulka scw ugana dhowri lahaayeen in lagu soo dhex daro waxan ka mid ahayn sunadiisa.
Culimadu waxay dhigeen qawaacid (tiirar) iyo qodobo kala cadeynaya xadiisyada kiisa saxiixa ah, kiisa daciifka ah, iyo kiisa mowduuca iwm. Iyagoo fadeexadaynaya kuwa dejiya xadiisyada mowduuca ah ee sal iyo raad toona lahayn..
Tiirarka/qaacidada ay dhigeen culimadu si ay u xifdiyaan in sunnada Rasuulka scw aan lagu soo dhex darin waxaa ka midda :
Inaan la garab marin Isnaadka .isnaadku waa waxay la gaar tahay ummadaan.Cabdullahi ibnu Mubarak wuxuu yiri isagoo isnaadka ka hadlaya((Isnaadku wuxuu ka mid yahay diinta haduuna isnaad jirin qof walbaa wuxuu doono buu iska oran lahaa ))
In la ogaado in xadiisku yahay mid ka sugnaaday Rasuulka scw. Taabiciintu RC hadeey maqlaan xadiis waxay ula imaan jireen saxaabada wayna waydiin jireen in xadiiskaan ay ka maqleen Rasuulka scw iyo in kale si ay u ogaadaan asalka xadiiska iyo inuu yahay xadiis saxiix ah .
Culimada in badan oo ka midda kama hari jirin wayna ceebeyn jireen kuwa ku been abuurta Rasuulka scw. Imaam Sufyan Athowriy waxa laga soo xigtay inuu yiri (ilaahay ma asturo qof xadiiska been ka sheegay )
Culimadii ugu caansanayd ee daba gashay fadeexaysayna kuna noqday seef qoorta ka saaran kuwa dejiya xadiisyada mowduuca ah waxaa ugu caansanaa:
Caamir ashacbi. Shucbah bin xujaaj,Sufyaan athowri, cabdulaahi ibnu Mubarak, Cabdiraxmaan bin mahdi iyo kuwo kaloo badan,, Ilaahay haka wada raali noqdo.dhamaantood..
Ilaahay swt wuxuu u soo saaray ummadaan imaamyo xifdiya Sunnada Rasuulkiisa scw daacadna ah kuwaasoo ka ilaaliyay sunnada wax walboo ay damceen beenaalayaashu inay ku soo dhex daraan sunnada saafiga ah.
Kutubta ugu caansan ee laga qoray Xadiiska mowduuca ah waxaa kamid ah:
waxaa qoray Ibnu Jowsiy. Waa kitaabkii ugu horeeyay ee laga qoro xadiiska mowduuca ah lakin culimo badan ayaa ka hor yimid iyagoo cilad uga dhigay inuu fududeystay xukunka xadiiska mowduuca ah, oo xadiis aan mawduuc ahayn uu ku tilmaamo mawduuc.
Waxaa qoray Jalaalu diin Asuyuudi. Waana kitaab uu ka soo gaabiyay kitaabkii hore ee Ibnu Jowzi wuxuuna ku daray waxyaabo dheeraad ah oo uusan sheegin ibnu jowsi
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة
Waxaa qoray ibn Carraaq Al kannaaniy, Waa kitaab faaido badan leh sidoo kale sheekhu wuxuu ka soo gaabiyay labadii sheikh ee ka horeysay kitaabadoodii …
Wallahu aclaa wa axkam
WQ: Najma Sicid
from → Duruus Yaryar Cilmul Xadiith, Xadiiska Mawduuca Q2aad
← Xadiiska Mawduuca Qeybta 1aad
Sanadka/silsilada xadiiska iyo muhiimadiisa →